ओखर खाँदा हुने चामत्कारिक फाइदा यस्ताछन्
Homeसमाचारओखर खाँदा हुने चामत्कारिक फाइदा यस्ताछन्
October 27, 2020 admin समाचार 11648
ओख’रलाई हामी अन्य फ’लफूल झै खाने गर्दैनौ । यसलाई तिहारमा भाइ’मसला प्रयोग गरिन्छ । यो स्वास्थ्य’बर्धक फल हो । तर यसको गुणबारे जान’कारी नहुदाँ यसको उपभो’ग कमै मात्र मानिस गर्दछन् ।
ओखरले हाम्रो दि’मागको वृत्ति’विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्छ भन्ने मानिसमा भ्रम छ । ओखरले बौद्धिकता विकासका अलावा सम्पूर्ण शारीरिक एवं मान’सिक स्वास्थ्यका लागि पनि अति उ’पयोगी मानिएको छ । यदि हामीले दैनिक रुपमा केवल ४ वटा ओखर मात्रै खाने गर्‍यौं भने यसले हाम्रो श’रीरमा हुने कैयौं किसि’मका रोग’लाई भगाउन मद्दत गर्दछ ।
ओ’खरमा फाइबर, प्रोटिन, भिटामिन, म्याग्ने’सियम, फस्फोरस र ओमेगा ३ जस्ता कैयौं पौ’ष्टिक पाउने गरिन्छ । साथै यसको सेवनले क्यान्सर, मोटोपन र मधुमेह जस्ता रो’गबाट समेत बचाउने गर्दछ । नियमित ३/४ वटा ओखर खाने मानिसमा यी रोगको सम्भा’वना कम हुनुका साथै वजन नियन्त्र’णमा पनि सघाउ पुर्याउँछ ।
ओखरको सेवनले प्रतिरो’धात्मक क्षमता, प्रजनन क्षमता र स्मरण शक्ति बढाउने गर्दछ । ओखरलाई पावर फुडको उपनाम समेत चिनिन्छ । यसमा हुने पोषणले मानि’समा स्टामिना बढाउन स’हयोग गर्दछ । ओखरको सेवनले अनिन्द्राको समस्या’बाट समेत बचाउँछ । साथै यो डाइटिङ गर्नेहरुका लागि आवश्यक पर्ने सबै कि’सिमका पौष्टिक तत्वहरु यसमा पाइने भएकोले यसलाई डा’इटिङमा फाइदाजनक मानिन्छ ।
ओख’रको सेवनले हृदयको रोगबाट समेत बचाउने गर्दछ । यसले तनाव कम गरेर रक्तचाप सन्तुल’नमा राख्न सहयोग गर्दछ । यस अलावा ओखरमा ओमेगा ३ पाइने भएकाले शरीरमा को’लेस्ट्रोलको स्तरलाई कम गराउन सह’योग गर्दछ । -खबरहब बाट
बडादशैँको आज नवौँ दिन, सिद्धि’दात्रीको विशेष पूजा गरिँदै
दीपिका पादुकोणले किन ड्रग्सको सहारा लिइन् त ?
नीता ढुंगानाको आ ‘क्रोश – ‘मेरो देशले मेरो रक्षा गर्न स’क्दैन भन्ने थाहा पाएँ (भिडियो सहित)
May 26, 2021 admin समाचार 6085
मुलुक य’तिबेला कोरोना म हामारीसँग लडि रहेको छ । दिनहुँ संक्र मणको ग्राफ उकालो लाग्दो छ । यसबाट मृ’ त्यु हुनेको संख्या दिनमै २ सय नाघ्न थालेको छ । अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीले अक्सिजन पाउन सकेका
September 23, 2020 admin समाचार 12132
मृ ‘त्युको मुखबाट ब चेँकी नायिका विपना थापाले रुँदै खोलीन्, भारतमा रहँदा आँफुले सहनु परेको पिडा(भिडियो हेर्नु’होस)
March 21, 2021 admin समाचार 6040
कुनै समयकी लोकप्रिय नायि’का विपना थापा २ वर्षपछि आफ्नो माइती घर आ’एकी छिन् । करिब डेढ दशकअघि नेपाल’बाट विबाह गरेर भारत पुगेकी सुन्दरी नायिका विपना एन्फा अवार्ड’डको अवसर पारेर स्वदेश आएको मौका छोपेर पिभिन्न मिडियामा
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (241924)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229825)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229459)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (228442)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227828)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (227395)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226625)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226202)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194226)